Madaxweyne Shariif: Abaalka Turkiga ma ahan mid aan gudi karno | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweyne Shariif: Abaalka Turkiga ma ahan mid aan gudi karno
MUQDISHO(KEYDMEDIA)Madaxweynaha Dowlada KMG Soomaaliya oo ka hadlayay maalintii shalay xaflad sagootin ah oo loo sameeyay ku dhawaad 500 oo arday oo hellay deeq waxbarasho lacag la’aan oo dalka Turkiga ah ayaa sheegay in dowlada dalka Turkiga ay garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in dadka Soomaaliyeed aysan hilmaami doonin walaalahooda Turkiga.
Waxaa kale uu madaxweynaha Sheegay in ardaydii heshay deeqdaasi looga baahan yahay in markii ay wax soobartaan inay kusoo labtaan dalka Soomaaliya si ay wax ugu sii faa’deeyaan shacabka kale ee aan fursadaas hellin.
Dowlada Dalka Turkiga ayaa dhawaanahaan ka waday Dalka Soomaaliya wax u qabasho ku aadan sidii Soomaaliya looga caawini lahaa dhibaatada heysata Dadka Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa jirra in dhaqaatiir u dhalatay dalka Turkiga ay ka wadaan deegaanada Maamulka Puntland Galmudug Somaliland iyo Koonfurta Soomaaliya Howlo Caafimaad oo wax loogu qabanayo dadka qaba cudurada kala duwan waxaana taasi ay ka dhigaysa in Soomaalida marna aysan Hilmaami karin Shacabka iyo madaxda Turkiga.